Gazety iray mitentina $ 14.99 | Martech Zone
Gazety iray mitentina $ 14.99
Alahady, Jona 18, 2006 Alatsinainy, Aogositra 24, 2009 Douglas Karr
Raha tsy nandinika ny fizarana magazine ianao tato ho ato, dia tokony haka fotoana kely ianao ary haka kopian'ny Famolavolana tranonkala azo ampiharina avy amin'ny Future. Izaho dia namaky ity gazety ity nandritra ny roa taona izao, nijery azy io nitambatra sy namony ho lasa mahafinaritra isam-bolana. Azonao atao ny mahazo fisoratana anarana (nafarana) $ 122 / taona eo ho eo ary mendrika isaky ny denaria izany.
Na inona na inona manager na marketing anao na programmer anao dia hanana fampahalalana ho anao ny fanontana tokana. Ankoatry ny lahatsoratra vita pirinty, ny fanontana tsirairay avy dia misy koa CD feno fonosana rindrambaiko sy fampianarana maimaimpoana.
Ireto misy ohatra amin'ny lahatsoratra tsara avy amin'ny fanontana Jona:
Fantatrao ve fa tena izy tsy ara-dalàna hanao tranokala tsy azo idirana ao amin'ny Fanjakana Mitambatra? Tsy ampiharina ny lalàna, fa eo ambanin'ny lalàna momba ny Disability diskriminitra dia azo enjehina ny orinasa UK raha tsy azo idirana ny tranonkalany! Ity a rohy mankany amin'ny torolàlana UK. Ny loharano hafa dia ny W3C (World Wide Web Consortium) torolàlana.
Mampiasa Google Analytics
Manatsara sary ho an'ny tranonkala
Fametrahana amin'ny CSS
Mamorona atiny amin'ny Dreamweaver izay azo toggle na off
Kitapo fanaovana sary an-tsary ao Flash
Fitantanana atiny miaraka amin'ny PHP
Quiz, kalandrie ary boky fandraisam-bahiny miaraka amin'i PHP
Manonona sary ao amin'ny Photoshop
Ary lahatsoratra, torohevitra ary fika hafa an-jatony.
Iray volana lasa izay, ilay magazine dia nanana famaritana fohy sy mamy ary ny tantaran'ny teknolojia samihafa eto amin'ny Internet… XML, PHP, Ruby, .NET, sns. Izay tena tsara tokoa ka nividy kopia fanampiny roa aho ary nalefako tany mpiara-miasa sasany. Raiso ity magazine ity !!! Ao amin'ny Bounds, amidy amin'ny $ 14.99 izy ary mendrika isaky ny denaria!
Inona no atao hoe Mashup?